Ukuhlangabezana indlovukazi wokugcina baseGibhithe kule game zomlando ka Cleopatra Plus bahambe umshini isikhathi ukufinyelela eGibhithe lasendulo. Cleopatra Plus iyingxenye yochungechunge the Cleopatra Slots yakhelwe futhi lakhiwa Onjiniyela International Gaming Technology ezinze eLondon. Lo mdlalo linikeza ongakhetha eziningi abahola ovusa abadlali futhi ngaleyo ndlela IGT is abahola omkhulu aphume kulolu chungechunge Slots.
IGT izinze e London namahhovisi ayo ezinkulu e Providence, Las Vegas okuyinto isikhungo wokudlala, neRoma. Le nhlangano isebenza ezingaphezu kuka 100 amazwe emhlabeni wonke futhi ngenxa ezomnotho kanye nokuchichima kokuthula izimali ususondele, it has nezindlela eziningi ibhonasi ukunikela abadlali emidlalweni adalwe kwabo. Le nkampani ikhiqiza izinhlobo ezihlukahlukene zale yokudlala ubuchwepheshe kanye slot imidlalo ikhasino inthanethi kanye okungaxhunyiwe.
Cleopatra Plus has 5 reels futhi 40 paylines enikelwa abadlali. Zikhona ongakhetha eziningi ekhokha okunqunyiwe ngesimo bonus izici kule game.
Level Up Isici- Lokhu kukuvumela umdlali uthole ngokusho ikhwalithi kanye isikhathi game yena udlala, okuyinto umenza uvule amazinga aphakeme.
Bonus Map- Unika umdlali ibalazwe guiding esisetshenziselwa lapho ibhonasi Cleopatra icushiwe. Kunikeza osebenzisa khulula.
osebenzisa Free Bonus- Unikeza 5 osebenzisa free nge 1x wokuphindaphinda
Cleopatra Bonus- Ngosizo ibhonasi imephu, ungakwazi ukunqoba kuze kufinyelele 30 ezengeziwe osebenzisa free nge up to 5x Okuphindaphinda noma 10 super osebenzisa nge 50x wokuphindaphinda. Kodwa konke kuncike ezingeni usuvule.
Cleopatra, ngokuba endle endle embondelene, imiklomelo umklomelo ophakeme kunayo yonke yalo mdlalo uma ungathola 5 kubo ndawonye payline. I endle embondelene ukwandisa amathuba win eminye. The 2 endle ukunikeza wokuphindaphinda 2x lapho zibekwa.
Umdlalo has a ukubuya iphesenti umdlali 95% okuyinto ngempela ehloniphekile.
Isihluthulelo ukudlala futhi abahola ukukhokhelwa omkhulu aphume Cleopatra Plus ukudlala it more and more ngawe ukuba awaqonde ngokucacile imithetho. Lo mdlalo uye wakwazi onogazi abadlali phesheya ngisho nezinga eliphansi quality ingcaca futhi ibuye naphezu kweqiniso lokuthi izimpawu akuzona zikanokusho okudala ukuze ezihlobana ngayo nesihloko esikhulu eGibhithe lasendulo.
Queen of nezeNgcebo
£ 5 Mobile Casino Khulula osebenzisa + Play 200% 1st Deposit…
Free Slot Machine | Grab 10% Cash Back Up To £ 50 NgoLwesibili